‘मतदातामैत्री चुनाव नै लोकतन्त्रको आधार हो’
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन बुधवार सम्पन्न भयो । प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा भएको यो निर्वाचनले आगामी असोजमा हुने प्रदेश नं. २ को निर्वाचनका साथै प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचका लागि पनि आधार सिर्जना गरेको ठानिएको छ । दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको स्थानीय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन नागरिक समाजको भूमिका असाध्य महत्त्वपूर्ण रह्यो । निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का साथै शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) सित सहकार्य गर्दै आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) क्रियाशील र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनदेखि नै पर्यवेक्षणलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर ज.ब.रा. (राणा) को सक्रियता सराहनीय देखिएको छ । वि.सं. १९८४ पुस काठमाडौँमा जन्मनुभएका राणा उमेरले नौ दशक टेक्दा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र समृद्धिप्रति असाध्यै चिन्तनशील र सक्रिय हुनुहुन्छ । नागरिक समाजका तर्फबाट शान्ति प्रक्रियामा समेत सक्रिय राणासित गोरखापत्रका लागि पत्रकार जुनारबाबु बस्नेतले लिनुभएको अन्तर्वार्ता :
 यहाँ आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा समग्र रूपमा यो निर्वाचनको पर्यवेक्षकीय मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
 निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
 यहाँहरूले त पहिलो चरणदेखि नै निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहनुभएको छ । आचारसंहित परिपालनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
 यहाँहरूले केही दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा त निर्वाचन आयोगको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभयो । आयोगको कार्यसम्पादनमा पनि असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ र ?
 निर्वाचनको मिति सार्न त निर्वाचन आयोगको भूमिका छैन । मिति तोक्ने पनि सरकार नै हो । सरकारले नै असन्तुष्ट समूहलाई पनि समावेश गरेर निर्वाचन गराउन चाहेर पटक–पटक सारिएको देखिन्छ । सबैलाई समेट्न खोज्नु त ठीकै काम होइन र ?
संविधान बन्ने बेलादेखि नै कतिपय दलको असन्तुष्टि थियो तर त्यही असन्तुष्टि समाधान गर्नका लागि भनेर पटक–पटक निर्वाचन सार्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । सरकार र राजनीतिक दलमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । कस्तो असन्तुष्टि हो ? दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव सार्ने, आन्दोलन गर्ने भन्ने अनि पाँच नम्बरमा गएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने । यो कुरा अलि मिलेन । दलहरूका नीति, विचार र कार्यक्रममा त एकरूपता हुनुपर्छ । स्पष्ट हुनुपर्छ । चुनाव सार्दै जाँदा असारको मनसुनी वर्षा र मधेशको गर्मीको धुपमा चुनाव हुन गयो । आममतदातालाई त ठूलो मर्का प¥यो नि । सरकार, राजनीतिक दल वा निर्वाचन आयोगले समय मौसम अनुकूलक त विवेक पु¥याएको देखिएन । पछाडि जो जसको कारण भए पनि निर्वाचन आयोगले यस्ता कुरामा अडान लिन सकेको भए मतदाताले यस्तो विधि दुःख पाउने थिएनन् । प्रतिकूल मौसममा चुनाव गर्दा प्रभावकारिता नबढ्ने कुरामा त विचार पु¥याउनैपर्छ । आगामी दिनमा पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । असार, साउन वा पुस, माघमा हामीकहाँ चुनाव गर्नु ठीक हुँदैन ।
 निर्वाचन भड्किलो भएको कुरा त उठिरहेकै छ । निर्वाचनलाई कसरी मर्यादित र मितव्ययी बनाउन सकिन्छ ?
 यहाँ त मुुलुकको पहिलो अर्थसचिव (२००७/८ साल) र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो गभर्नर पनि हुनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गरेको अनुभव पनि छ । अर्थराजनीतिमा गहिरो दुःखद राख्नुहुन्छ । मुलुक कहिले समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्छ ?
 सुधारको लक्षण देखिन थालेका छन् होइन ? आर्थिक वृद्धि राम्रो देखियो यो वर्ष । नयाँ पुस्ता आएको छ, होइन र ?
 नयाँ पुस्ताको ठूलो अंश त विदेशमा छन् । देश बनाउने युवा पलायन भएपछि कसरी समृद्धिको आशा गन सकिन्छ ?
 हरेक मुुलुकको राष्ट्रिय सपना हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय सपना कस्तो हुनुपर्छ ?
 आगामी माघ ७ गतेसम्म प्रदेश र केन्द्रीय संसद्का निर्वाचन गर्नुपर्छ तर स्थानीय निर्वाचन पनि प्रदेश नं. २ को त असोजसम्म धकेलिएको छ । समयमै निर्वाचन गर्न सम्भव छ ?
सम्भव गराउने दायित्व सरकारको हो । चुनाव गर्न उसले सबैको सहयोग पाउनुपर्छ, जुटाउनुपर्छ । केन्द्रको निर्वाचन त सम्भव छ तर प्रदेशका लागि ऐन कानुन नै बनाउन बाँकी छ । छिटो र छोटो बाटोबाट विधेयक लगेर कानुन बनाउनुपर्छ । दुवै चुनाव एकैपटक गरे त खर्च र समयको पनि उपयोग हुन्छ । चुनाव पनि दल र नेतामैत्री होइन, मतदातामैत्री हुनुपर्छ । दलहरू नीति, विचार र कार्यक्रम पनि मतदातामैत्री हुुनुपर्छ । चुनाव मतदातामैत्री हुँदा निकास खुल्छ । विकासको बाटो खुल्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।